Mgbe ụfọdụ, mgbe agbapụ ndị video ma ọ bụ na-ewere na foto a, i kwesịrị ime mgbanwe ụfọdụ ka tụfuo na-abaghị uru stof. Mgbe ụfọdụ, ị mkpa bee ala nanị a kpọmkwem akụkụ nke fim ma ọ bụ foto maka nzube kpọmkwem. Ọ na-adabere gị mkpa otú ị chọrọ jikwaa gị foto ma ọ bụ fim. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ ubi a nkiri na iMovie iji Mac, ebe a bụ ụfọdụ nzọụkwụ inyere gị aka. Site na-eso nzọụkwụ ndị a, ị pụrụ nanị ubi vidio na ala enweghị na-aga site hassling na siri ike ọrụ.
Part1: akuku a Video na iMovie on Mac
Part2: akuku a video na iMovie on iPhone / iPad
Part3: Olee otú ihe ubi a video on windows?
1. Gaa na oru ngo nchọgharị na họrọ faịlụ na ị chọrọ dezie. Mgbe na-ahọpụta ndị clip, pịa "C" ma ọ bụ pịa akuku bọtịnụ.
2. Ke cropping ngwá ọrụ na-ekiri, ịdọrọ pointer ka resize ma ọ bụ reposition n'ógbè ahụ na-elekwasị anya na isi ihe ụfọdụ. Bugharịa ihe pointer ka nkuku nke mere na pointer atụgharịa n'ime a gbakwunyere ịrịba ama. Ị nwere ike ugbu-eme ka ọ nnukwu ma ọ bụ obere ka kwa gị chọrọ iji ịgbanwe size. Ọ bụrụ na ị chọrọ jikwaa nwa ókè-ala, nnọọ pịa Kwe Ka Black. Ndị ọrụ bụ naanị ejedebeghị ka photos.
3. Mgbe-emecha n'elu nzọụkwụ, ị nwere ike pịa bugharia button bugharia videos na foto ma na ekpe ma ọ bụ aka nri. Mgbe ọ bụla ị pịa bugharia button, ọ ga-oyiyi 90 degrees. Ọ nwere ike ime na ihe oyiyi ga dabara oru ngo-akụkụ ruru na nwa Ogwe pụrụ iyi na n'elu ma ọ bụ ala nke ihe oyiyi ahụ. Ọzọkwa, ọ nwekwara ike-egosi na ihe ziri ezi na-ekpe n'akụkụ.
4. Pịa na play button na ike ga-hụrụ na-ekiri ka ịhụchalụ video ma ọ bụ foto. Ọ bụrụ na ị nwere afọ ojuju na-arụ ọrụ, pịa "Emela 'ịrụcha n'usoro n'usoro ma ọ bụ cropping vidiyo ma ọ bụ foto na iMovie.
The iOS ngwa, iMovie yiri maka ihe ọ bụla Apple ngwaọrụ ma ọ bụ Mac, iPad ma ọ bụ iPhone. Na iPad, ị nwere ibu na ihuenyo-arụ ọrụ na cropping vidio ma ọrụ N'otu aka ahụ dị ka nke iPhone. Ebe a bụ ihe dị mfe na ndu ka ubi a video na iMovie on iPhone ma ọ bụ iPad.
1. Kpatụ gbakwunyere button na-amalite oru ngo a ga redirect gị ka video clip usoro iheomume na ndị ọzọ na ngwaọrụ dị ka mma.
2. Kpatụ Media Library Button na menu mmanya ịgbakwunye mkpachị n'ime usoro iheomume. Ọ ga-abịa na niile mkpachị gị gallery. Ị nwere ike tinye ihe karịrị otu clip n'out oge site na ịme ọpịpị Media Ọbá akwụkwọ na mgbe ahụ okpukpu abụọ tapping clip. Otú ọ dị, ọ na-akawanye mfe ma ọ bụrụ ị ịnyagharịa otu clip na oge. Mgbe edezi mkpachị, ị ga-adịghị mkpa na-agwụ ike stof, dị ka ị chọrọ ka ị na-oru ngo ụtọ na mkpụmkpụ. Wepụ Mpaghara na-kwa ogologo ma tinye baghị uru oru ngo na-adịghị mkpa na-ke nkiri. Ndị ọzọ okwu, nta ka mma.
3. Iji mee ka gị clip nkenke na mkpa, megharia red usoro iheomume welara n'ebe ọ bụla ị chọrọ ka ịgbanwe na cur ndị na-adịghị mkpa stof. Bee clip, pịa mkpịsị aka gị na n'elu nke welara na pịa nsoroụzọ ala. Ọ bụrụ na ị bee clip ezighị na chọrọ inwe ọ laghachi azụ, ikwanye gị iPhone ime ka Wepu bọtịnụ.
4. Mgbe ị na-eme na mkpa mgbanwe, a igbari mgbanwe ga-akpaghị aka na-egosi. Ị nwere ike ịkpali ndị welara n'elu clip dezie iberibe a clip. Jide n'aka ghara ime ka ogologo footages, dị ka ọ pụrụ iyi agwụ ike. Ọ bụrụ na ihe na-adịghị ịrịọ gị, olee otú ndị na-ekiri na-ahụ ya na-adọrọ adọrọ? Jiri odo mkpụbelata mmịfe ka ogologo ma ọ bụ na-ebelata usoro iheomume nke clip. Ọ nwere ike na-mere maka photos dị ka mma.
Ọ bụ eziokwu na ị chọrọ idezi ụfọdụ akụkụ nke gị oru ngo mgbe ẹkụre dị ka ide, foto na obere vidiyo. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị nwere video faịlụ na nwa Ogwe n'elu ma ọ bụ ala, ị pụrụ iji ihe ubi video iji dabara akụkụ ruru.
E nwere nọmba nke video edezi software n'ihi na windo sistemụ na-ga-eme ọrụ nke ọma. Otú ọ dị, Wondershare Video Converter Ultimate-ukwuu tụrụ aro site ọkachamara. Ọ bụghị nanị na enhances gị video, ma na-enyere gị ubi vidiyo ma tụfuo adịghị mkpa stof. I nwekwara ike ịkọrọ gị vidiyo na dị iche iche weebụsaịtị dị ka YouTube ma ọ bụ ọkụ nke DVD video ozugbo. Ọ bụrụ na ị na-amaghị nke otú iji Wondershare Video Converter Ultimate ka ubi mkpachị, ebe a bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ guideline.
1. Mgbe importing video, pịa Dezie.
2. Pịa mkpụbelata button n'elu nri nke video edezi window ka ubi gị video. Ọ ga-enyere gị ihichapụ achọghị akụkụ nakwa tinye watermark na ndepụta okwu.
3. Mgbe edezi dị ka gị chọrọ, pịa Ok ịzọpụta gị video.
4. Ọ bụrụ na n'ihi bụ ka kwa gị chọrọ, pịa "tọghata" ịzọpụta cropped video.
5. Ị nwere ike ịzọpụta video ọ bụla format-amasị gị na kọmputa gị site ị na-ahọrọ "Format". Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ igwu video na gị iPad, iPod ma ọ bụ iPhone ngwaọrụ, pịa "Ngwaọrụ" ma họrọ thumbnail nke ngwaọrụ gị. Ọ bụrụ na ị na-eme ka video iji nweta nnukwu ego nke okporo ụzọ, i nwere ike ozugbo bulite ya YouTube ma ọ bụ ọkụ a DVD maka egwu na TV iji DVD ọkpụkpọ. Ọ niile na-adabere otú ị chọrọ na-ekiri na ihe clip e mere maka.
The Wondershare Video Ntụgharị maka Windows Ultimate abịa na top notch atụmatụ na ga-enye gị videos a ọhụrụ anya ma na-eche. Ọ bụ ihe nile na otu ihe ngwọta maka video edezi. N'agbanyeghị, nke ngwaọrụ ị chọrọ iji tọghata n'ihi na, a software nwere ike mgbe-ekwesịghị ileghara anya. Ị nwere ike idezi vidio na gị onwe gị ụzọ site cropping, converting, ime na ọtụtụ ndị ọzọ. Nwalee ugbu a na-enweta kacha video edezi.
Olee otú mbubata YouTube Videos ka iMovie
Olee otú tinye ederede / ndepụta okwu / captions ka iMovie on Mac na iPad
> Resource> iMovie> Video cropping on iMovie na Wondershare Video Ntụgharị